Ọgba aghara na-ebilite na Switzerland maka paspọtụ COVID-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Switzerland » Ọgba aghara na-ebilite na Switzerland maka paspọtụ COVID-19
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ na -agbasa ozi Switzerland • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ndị uwe ojii Bern wusiri ụlọ omebe iwu ike wee jiri mgbọ mmiri, anya mmiri na mgbọ rọba chụsasịa igwe mmadụ na -eme ọgba aghara.
N'ịkọwa ịrị elu nke ọnụ ọgụgụ ikpe coronavirus ọhụrụ, gọọmentị Switzerland wepụrụ akwụkwọ ikike COVID-19 dị mkpa na Septemba 13.
Ọtụtụ mmadụ gafere na Bern, na -abụ abụ "nnwere onwe" ma na -akpagbu ndị uwe ojii.
Ndị uwe ojii Bern jiri mgbọ mmiri, gas anya mmiri na mgbọ rọba chụsasịa igwe mmadụ na -eme ọgba aghara.
Ndị ọchịchị machibidoro mkpọchi mgbochi COVID-19 nke abalị a na Bern ma ndị na-ahazi kagburu ya, mana ọnụ ọgụgụ mmadụ ka na-egosi wee na-aga isi obodo de facto nke Switzerland, na-abụ abụ "nnwere onwe" ma na-akpagbu ndị uwe ojii Bern.
Ka abalị na-ada, ndị ọchịchị zaghachiri site n'ịgbagharị ndị na-eme ngagharị iwe mmiri na-eme ngagharị iwe megide akwụkwọ ikike COVID-19 nke gọọmentị nyere ikike. Enwekwara ihe nkiri nke ndị uwe ojii na -eme ngagharị iwe na -agba mgbọ ogbunigwe anya mmiri na -ekesa na soshal midia.
Ụfọdụ ndị ngagharị iwe ahụ tụbara ndị uwe ojii ihe, ka ha na -afụ mkpọrọhịhị ma na -akụ.
Vidiyo na foto ndị mbụ si Bern gosi igwe mmadụ na -ezukọ n'ọdụ ụgbọ njem ma na -abụ abụ "Liberte!" - 'nnwere onwe' na French, otu n'ime asụsụ eji Switzerland. Ejirila otu abụ a na France gbara agbata obi iji mee mkpesa na paspọtụ COVID-19.
Mgbe e mesịrị, ìgwè mmadụ ahụ rutere n'okporo ámá nke Bern kwuputa nzuko omeiwu.
Agbanyeghị, ndị uwe ojii nọ na nche kemgbe ụtụtụ, na -eguzobe ihe mgbochi gburugburu Bundeshaus, oche nke ụlọ omebe iwu Switzerland.
Ndị na-eme ngagharị iwe megide COVID-19 gafere ọhụrụ etinyere na ndị uwe ojii na mpụga ụlọ omeiwu. Onye isi nchekwa Bern Reto Nause kọwara ya dị ka mbọ iji "wakpo n'obí eze etiti," ndị ọchịchị zaghachikwara site n'iji mgbọ mmiri chụsa ndị na -eme ngagharị iwe na machibido nnọkọ "enweghị ikike" n'ọdịnihu.
N'ịkọwa ịrị elu nke ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa coronavirus, Switzerland wepụtara akwụkwọ ikike COVID-19 dị mkpa ga-amalite na Septemba 13. Akwụkwọ asambodo ahụ na-egosi ihe ịgba ọgwụ mgbochi, mgbake ma ọ bụ nsonaazụ nnwale na-adịbeghị anya, a ga-ewepụta ya ka ọ banye n'ụlọ nri, ụlọ mmanya, mgbatị ahụ ma ọ bụ oghere ọhaneze ndị ọzọ. Atụmatụ a ga -agwụ na Jenụwarị 2022.